Waayo farshaxanada shakhsiga ah iyo kuwa dhaqanka haya, wax badan ka baro McKnight Artist Fellowships, Golaha Degaannada Gobolka, iyo Deeqaha Fanka Dadweynaha ee Saadaasha.
Ururada farshaxanka, talaabada ugu horeysa waa inaad barato qaabkayaga. Waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad dib u eegto annaga maalgelinta FAQs iyo ururada farshaxanka ee noo keydka macluumaadka.
Haddii, ka dib markaad akhrido habkayaga iyo maalgelinta Su'aalaha la isweydiiyo, aad dareento in ururkaagu ku habboon yahay istaraatiijiyadayada maalgelinta, la xiriir Kooxda Fanka & Dhaqanka ka hor intaadan bilaabin foomka weydiinta hore. Tani waxay caddayn doontaa wixii su'aalo ah ee aad qabtid, waxayna naga caawin doontaa inaan sahamino haddii ururkaagu yahay mid ku habboon.
Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa emayl afar illaa lix toddobaad ka dib markaan helno weydiintaada, ama inaan ku siinno tilmaamo lagu soo gudbiyo arjiga soo -jeedinta oo dhan onleenka, ama la diido maalgelinta.
Waxaan siinnaa deeqaha guud ee hawlgalka (aan xadidnayn) iyo barnaamij/mashruuc gaar ah (xaddidan) oo la siinayo ururada, kooxaha, iyo Qabiilka Qowmiyadaha ugu horreeya Minnesota. Waxaan samaynaa deeqo xaddidan oo ka baxsan Minnesota oo awood u leh inay u muujiyaan faa'ido cad fannaaniinta Minnesota iyo dadka dhaqanka u haya. Waxaan tixgelineynaa deeqaha raasamaalka ee xaddidan, sida caadiga ah kuwa hadda la siiyo.
Hay'adaha dawladda, oo ay ku jiraan Qabiil Qabiil, ayaa codsan kara maalgelinta barnaamijyada ama mashaariicda gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan ma maalgelin doonno waxqabadyada caadiyan ah mas'uuliyadda kaliya ee dawlad.
In kasta oo codsadayaasha intooda badan la maalgeliyo ay Adeegga Dakhliga Gudaha u kala saaraan ururada aan macaash doonka ahayn ee cashuur-dhaafka ah, xaaladda aan macaash doonka ahayn khasab maaha in la helo maalgelin. Fadlan la xiriir shaqaalaha barnaamijka haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan u -qalmitaanka.
Aasaasayaashu waxay noqon karaan kuwa ugu wax -ku -oolka badan marka la isku geeyo khayraadkooda meelo yar. Taas macnaheedu waa ma taageeri karno mashaariic u qalma oo ka baxsan danaha barnaamijkeena. Tusaale ahaan, guud ahaan deeqo uma siino ururada, kooxaha, ama mashaariicda:
lacag ha siin fannaaniintooda
ugu horrayn soo bandhiga halkii laga soo saari lahaa/abuuri lahaa fanka
bixiyaan wax soo saarka keli ah, dhacdooyinka, bandhigyada, shirarka, ama xafladaha
taageero ka raadso deeqaha waxbarasho
waxay raadinayaan inay abuuraan ama koraan hibooyin
ku hawlan u ololaynta uu mamnuucay Xeerka Dakhliga Gudaha
Waqtiyada kama dambaysta ah ee baaritaanka McKnight waa saddexdii biloodba mar. Haddii lagu casuumo, taariikhda soo gudbinta baaritaanka ayaa go'aamin doonta marka soo jeedin buuxda ay tixgeliyaan shaqaalaha iyo guddiga. Fadlan ogow nidaamka dalabka onlaynku wuxuu furan yahay qiyaastii laba toddobaad ka hor waqtiga kama dambaysta ah si taariikhaha furan ee hoos ku qorani ay u kala duwanaan karaan sannad ilaa sannad maalin ama laba.
Dhammaan weydiimaha bilowga cusub ayaa bilaabmaya halkan. Weydiimaha socda waxaa laga heli karaa gudaha koontadaada internetka.
Haddii aad dhibaato ku qabto nidaamka codsiyada internetka nala soo wac (612) 333-4220 ama dir email kooxdayada Fanka & Dhaqanka.